Canfarta oo Itoobiya cunaha qabatay iyo waxaa ay ka heli doonaan. – Xeernews24
Canfarta oo Itoobiya cunaha qabatay iyo waxaa ay ka heli doonaan.
War aanu kahelay ilo xog Ogaala oo kusugan magaalada Addis ababa ayaa sheegaya in Canfartu xidhatay Wadooyinka Hawlbolaha Itoobiya ah ee Xadiidka Tareenka iyo Laamiga isku xidha Jabuuti iyo Itoobiya, inaysan Furin ilaa dawladu ka Aqbalayso dalabkooda dhul Soomaaliyeed doonka ah.
Sidda warka aanu kuhelay Canfarta oo looga itaal roonaaday loolanka in dhowaale ka socday 3-dii degmo ee Horay sidda sharcidarada ah loogu wareejiyay, ayaa u aragtay sidda Kaliya ee xukuumada Addis ababa ay cadaadis ku saari karto inay tahay xidhista Wadada Tareenka iyo Laamiga xidhiidhiya Jabuuti iyo Itoobiya, kuwaasi oo ah Halka 90% ay badeecadaha Itoobiya usoo maraan.
Mudaharaadka ay Canfartu ku xidheen Wadooyinkan oo ah mid siyaasadaysan ayna kadambeeyaan maamulka Canfartu, ayaa kadambeeyay kadib markii uu soo baxay Amar dhinaca Addis ababa kayimid oo Faraya Canfarta inay maleeshiyaadkooda kala baxaan 3-da degmo ee sidda sharcidarada ah kooxdii TPLF iyo adeegayaasheedu ugu wareejiyeen.
Amarkan oo aan wali si rasmi ah u dhaqan galin ayaa xogta aanu helay sheegaysaa in ciidama ka socda dawlada dhexe ay lawareegayaan Amaanka 3-daasi degmo inta xal waara loo Helayo muranka kataagan deegaamadaasi, waxaana Go’aankaasi si iskumid ah uga Horyimid maamulka iyo siyaasiyiinta Canfarta ah mucaarad iyo muxaafad ba.
Axmed Naasir oo ah muwaadin kusugan magaalada Addis ababa ayaa war baahinta u sheegay in Canfartu ay Og-tahay dhibaatada dhaqaale ee Itoobiya kasoo Gaadhaysa xidhista Jidadkan, waxayna iyaga oo Taa kaduulaya shuruudo dhawar ah Hordhigeen masuuliyiinta Hay’adaha Amniga oo duhurnimadii shalay Gaadhay ay shuruud kaga dhigeen in dawlada dhexe kanoqoto Go’aanka maleeshiyada Canfarta looga saarayo 3-dii degmo ee sharcidarada loogu magacaabay.
Shuruudan oo kadagi wayday Hay’adaha amaanka oo ciidanka milaterigu ugu Horeeyo ayay ilaa saaka ku adkaysanayaan waxgaradka iyo siyaasiyiinta Canfarta ee Horkacaya mudaharaadka lagu xidhay Labada Jid ee Itoobiya ugu muhiimsan, waxaana ilaa iyo Hada la Ogayn waxa ay noqon doonto Jawaabta xukuumada Ra’iisal Abiy oo wajahaysa mid kamida caqabadihii ugu adkaa oo aysan sahlayn in si dhib yar lagu Furdaamiyo.
Talaabadan ay canfartu ku talaabsaday ayaa lpp arka mid siyaasad xuma oo mustaqbalka dhow canfarta u keeni karta dib u dhac siyaasadeed waa markii labaad ee siyaasiyinta Canfarta looga awood bato loolaanka degmooyinka maxaa yeelay hadday Canfartu wax ka fulin lahayd heshiiskii magaalda Hawash ee dhulkan loogu gacan gashay waxay maanta ku doodi lahayd wixii horumar ah ee ay dadka deganka u qabatay laakiin siyaasad xuma maamulka Canafarta ayaa keenay dhabanahayska ku dhacay Canfarta.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2019/01/et-af.gif 217 451 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2019-01-14 09:54:502019-01-14 09:54:50Canfarta oo Itoobiya cunaha qabatay iyo waxaa ay ka heli doonaan.
Maamulkii Canfarta oo jidkii qudha ee Itoobiya dhuunta u ahaa Xidhay Ciidamada Cirka Itoobiya oo Duqayn culus u Gaystay saldhigyada Jabhada OLF.